Gabadh Qaarka Danbe Ka Naafowday Oo Farxadii Arooskeeda Ka Booday Kursigii Socodna Bilowday | Hawraar
October 12, 2014 Xiisaha/Xulashada No comments
Gabadh Qaarka Danbe Ka Naafowday Oo Farxadii Arooskeeda Ka Booday Kursigii Socodna Bilowday
Gabadh u dhalatay dalka Maraykanka, oo muddo lix sanadood ah naafo ahayd, ka dib markii ay gashay, shil gaadhi sanadkii 2008-dii, ayaa habeenkii arooskeedi farxadii awgeed, si dabiici ah uga sara kacday kursigii lagu riixayay, taas oo aad uga yaabisay marti sharaftii iyo eheladeedi ku sugnaa xaflada.
Gabadhan oo ka mid ahaan jirtay hablaha ciyaaraha qalaama rogodka ciyaara ee dalka Maraykanka laguna magacaabo, “Gina Javelin”, waxa ay ku nooshahay, magaalada McClelland, oo ka tirsan gobolka Aiwa ee dalka Maraykanka.
Gina Javelin ayaa markii shilka gaadhiga ay ku dhaawacan tay, sanad iyo badh ah ku jirtay cusbitaalka, halkaas oo dhawr qaliin ka dib, lagu guulaystay, Laakiin dhaawaca halista ah ee ka haleelay dhabarka ayaa ku keenay in qaarka hoose uu bakhti noqdo, awoodi kari waydayna inay ku socon karto labadeeda lugood, habka kaliya ee ay u dhaqaaqi kartaa, noqday in lagu riixo kursiga dadka naafada ah.
Daqiiqado ka hor xafladii arooskeeda ayay ku guulaysatay inay ka saro kacdo, kursigii lagu riixayay, waxaanay iyadoo sidii qof caadi ah la moodo, garabka qabsatay aabaheed oo isagu ku talo galsanaa, inuu isagoo ku riixaya kursiga gudaha u soo geliyo goobtii xaflada aroosku ka dhacaysay.
Dadkii ku sugnaa xaflada oo intooda badani wada garanayeen, horana uga war qabeen xaaladeeda ayaa markii ay arkeen iyadoo lugaheeda ku socota, mar kaliya isla oogsaday, farxad, waxaanay bilaabeen, sacab iyo mashxarad qofba wixii uu karayay, waxaanay iyagoo aad u xamaadaysan u soo galbiyeen gudaha.
Waalidka dhalay gabadhan ayaa iyagu farxad daraadeed ilmadu ka qubanaysay, waxaanay tilmaameen sida farxada arooska ee inantooda ay ugu sii biirtay, farxada kale ee istaaga iyo socodka labadeedi lugood ee shilka gaadhiga ay kaga naafowday.
Ninkan guursanayay gabadhan oo isagu u badheedhay naafo nimadeeda, una samray xaaladeeda ayaa isaga laftiisu aad u farxay, waxaanu muujiyay sida uu ugu guulaystay inuu dib ugu dhiso rejada gacaladiisa, waxa kale oo uu tilmaamay sida Rabi uga cawil naqay samirkiisi.